auteur novambra 10, 2016 Commentaires fermés
Nitondra fanazavana momba ny savorovoro nitranga teny Analakely nanoloana ny Lapan’ny Tanàna ny Alarobia teo ny Talen’ny Kabinetran’ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Rabarijaona Jean Claude. Nampalahelo ny toe-javatra toy ireny hoy izy satria niteraka korontana sady
auteur octobra 24, 2016 Commentaires fermés
Nanatanteraka fivoriana niaraka amin’ireo Fokontany 75 ato anatin’ny Boriboritany enina eto Antananarivo ny CARE International ny faha 19 Oktobra 2016 teny amin’ny Espace Country Club Ambohitrarahaba. Tatitry ny “simulation”, na andrana ho fiomanana amin’ny
auteur octobra 13, 2016 Commentaires fermés
Nosokafan’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana tamin’ny fomba ofisialy androany teo amin’ny Parvis Lapan’ny Tanànan’Antananarivo ny fakalazanan’ ny Kaominina ny andro iraisam-pirenena ho fihatrehana ny loza voajanahary. Marihana ihany koa fa ny 13 oktobra no
auteur octobra 6, 2016 Commentaires fermés
Niala ny saron-tavan’ireo mpitarika ny hetsiky ny mpivarotra amoron-dalana androany raha niantso olona hanao fihetsiketsehana teo anoloan’ny Lapan’ny Tanána Analakely, io maraina io. Olona nafana fo tamin’ny fikambanana iray, efa nivadika any amin’ny antokon’ny
Fanafiana mpiasa CUA
auteur septambra 30, 2016 Commentaires fermés
Mbola mitohy hatrany ireo fandratrana nihatra amin’ ireo ekipan’ny kaominina izay mpanadio ireo mpivarotra tsy ara-dalana eny amoron-dalana eto Antananarivo Renivohitra, amin’ny fampandrosoana ny Tanana sy ny fanadiovana. Androany tokony tamin’ny 3ora sy 45
auteur septambra 19, 2016 Commentaires fermés
Niharan’ny herisetra teo amperin’asa indray androany tolakandro ireo ekipa nandamina tsena teo Analakely, teo amin’ny Naza Electronic, ahitàna Polisy Monisipaly, Polisy Nasionaly ary mpiasa sivily avy amin’ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra. Polisy Monisipaly 3 no naratra
auteur septambra 6, 2016 Commentaires fermés
Manoloana ny zava-nitranga nanomboka tamin’ny 10 ora alina ny alatsinainy 05 septambra tao Anosipatrana tobin’ny Polisy Monisipalin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra, dia nisy andian’olona sivily sy miaramila nisaron-tava sady mirongo fitaovam-piadina niditra ankeriny ary namoaka
CUA : Fitokanana birao mpandrindra tetikasa
auteur aogositra 30, 2016 Commentaires fermés
Notokanana androany maraina teny Ampandrana-Besarety ny trano fiasan’ny Birao Mpandrindra ny Tetikasa Fampandrosoana an’i Madagasikara (Bureau de Coordination du Projet de Développement de Madagascar). « Andeha isika hiaro ny tananantsika, ny tantarantsika, ny kolontsaina. » Io
auteur aogositra 1, 2016 Commentaires fermés
Nidina tampoka nanaisotra mpivarotra toaka sady nanatanteraka fisavàna fiara mpitatitra (fiaraketsaka sy Taxi-brousse) ny ekipa avy amin’ny Fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo ny marainan’ny sabotsy lasa teo, nanomboka tamin’ny 4 ora. Nitarika izany ny Lefitra Voalohan’ny
Fihaonan’ny Ben’ny Tanàna tamin’ny Mpandrindra ny AV-COI
auteur jolay 25, 2016 Commentaires fermés
Antananarivo no handray ny Fivoriamben’ny AV-COI (Association des Villes et Communes de la Commission de l’Océan Indien), na ny fikambanan’ireo Tanàna sy Kaominina ao amin’ny Faritry ny Ranomasina Indiana, amin’ny faran’ny volana novambra sy